Gaas oo madaxweynayaal Afrikaan shir ugala qeybgelaya Ingiriiska – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Gaas oo madaxweynayaal Afrikaan shir ugala qeybgelaya Ingiriiska
A warsame 16 October 2014 20 October 2014
Mareeg.com: Madaxweynaha maamulka Puntland, Cabdiweli Maxamed Cali ayaa maanta ka dhoofay magaalada Garoowe ee xarunta gobolka Nugaal isagoo ku sii jeeda dalka Itoobiya, iyadoo la sheegay inuu socdaalkaas la xiriiro arrimo shaqo.
Shir jaraa’id oo uu ku qabtay garoonka diyaaradaha Garoowe ayuu ku sheegay in socdaalkiisa Addis Ababa kaddib uu u dhoofi doono dalka Ingiriiska oo uu uga qeyb gali doono shir looga hadlayo maalgashiga Afrika.
“Waxan maanta u dhoofayaa dalka Itoobiya oo aan shaqo u aadayo kabacdina waxan usii gudbayaa dalka Ingiriiska oo aan kaga qayb geli doono shir muhiim ah oo maalgelinta Afrika looga hadli doono wadamo badanina kasoo qayb geli doonaan” Madaxweynaha Puntland ayaa sidaas yiri isagoo intaas raaciyey inay Puntland sharaf u tahay in shirkaas keligeed lagu casumay iyadoo metelysa Soomaaliya oo dhan.
Shirkaas ayuu tilmaamay inay sidoo kale ka qeybgali doonaan madaxweynayaasha dalalka Uganda, Tanzania, Rwanda iyo Ghana.
Wafdi ka socda Qaramada Midoobay oo gaaray degmada Cadale
China’s Vicious Growth Circle